Ihe oru ngo Kartepe Teleferik di na mmiri! | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliIhe oru ngo Kartepe Teleferik di na mmiri!
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, General, Gondola, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey, TELPHER 0
ụgbọ ala kartepe
Nrọ nke uzo uzo nke Kartepe na njem Kocaeli na-eche kemgbe ihe dị ka afọ 50 bụ oge opupu ihe ubi ọzọ. 10 Disemba rozọ njem a na-eme n'okirikiri na 2018 agaghị eru 2020, ụbọchị nnyefe
Kartepe, ebe mbụ batara n’uche mgbe akpọtụrụ njem nlegharị n’oge oyi na Kocaeli, ka edobere ya maka 10 na Disemba 2018 maka ụgbọ ala ya nke nọworo na-achọ kemgbe ma enweghị ike itinye ya n'ọrụ, mana ọ dịgidere n’ụdị nke mbụ ya n’agbanyeghi ọnwa ole na ole gafere. N’ime ihe nrịba anya nke 2017 emere na Septemba 2018, emume mbido ala a ka e mere na Derbent Mountain Road-Polygon Mpaghara na Ibrahim Karaosmanoglu, onye isi obodo oge ahụ, kwere nkwa ịnapụta ọrụ ahụ maka 2020 n’aka onye ọrụ ngo ahụ Valter Asansör. Na mgbakọ Kartepe, 2020 bụkwa nrọ. Hüseyin Üzülmez, onye bụbu onye isi obodo nke Kartepe Obodo na İbrahim Karaoasmonğlu, onye bụbu onye isi obodo ukwu, jiri ọrụ a n'etiti atụmatụ itinye ego n'oge oge ntuli aka ọ bụla. O yiri ka oru ngo a ọ ga-adịgide n'etiti ọrụ ntinye ego nke AKP na oge ntuli aka ọhụrụ.
ATB FLR HAVE FATARA MARA NKWU NA ANY WAS AJULR F EGO
Maazị Kocaman kwuru na ọ nyochaala akwụkwọ nkwekọrịta banyere ụgbọ ala USB nke etolitere na Mgbakọ Kartepe ụnyaahụ wee sị, a kwadebere nkwekọrịta mara mma nke ukwuu na oge gara aga. Agbanyeghị, mgbagha akụ na ụba na mgbanwe ọnụọgụ mgbanwe metụtara onye na-azụ ahịa ma ghara imezu nkwa ya. Usoro iwu na-aga n'ihu. M na-echekwa mkpụrụ ego 1 nke kansụl ahụ. Anyị ga-arụ ọrụ a n’enweghị nsogbu ọ bụla n’obodo anyị. Ihe ọ bụla merenụ, anyị agaghị abanyeghachi n'ụgbọala USB. Olile anya, oburu na enwegh ihe obula site na Allah, anyi gha ebubata ugbo ala na Kartepe na oge a
KARAOSMANOĞLU kwuru na ya nyere ọrụ ahụ!
Onye uwe ojii nke oge ahụ, Ibrahim Karaosmanoglu kwuru na ha nyere ndị mmadụ ọrụ n'ememe igirigi ụdọ ahụ. Anyị na-ewere nkwa a nke ụlọ ọrụ anyị. Ndi ime obodo nwere ike ime nke a, mana ị ga-enye ndị gị nke a. Ọ bụrụ na anyị mere ya dịka obodo, ọ na-ebute oke mmefu na nsogbu arụmọrụ. Transferlọ-rụọ ọrụ ịnyefe usoro kachasị mma. Ahụla m ụlọ ọrụ Valter ebe ọ na-arụ ọrụ, enwere m olileanya na ha ga-achọta otu ụdị. Echere m na ha agaghị emebi ọdịdị ahụ. Enwere m mmetụta dị ukwuu na gburugburu ebe obibi, echere m na ọ ga-abụ ọrụ kwekọrọ n'ụdị ebe a ..
Mmetụta nke nnukwu ọrụ nke ga-eme ka ugwu Samanlı rute ugwu Izmitl na Ọdọ Sapanca n'otu oge gafere n'ọhịa nwere ọtụtụ ụdị osisi, nke a na-ewere dị ka nrọ 50 kwa afọ na Kartepe, bụ nke emere na Septemba, nke nwere ọkwa kachasị elu nke terlọ Ọrụ Valter Elevator. ọ natara. Atụmatụ ụdọ ahụ a na-eweta na March 2017 ga-efu ihe dịka 2018 Nde TL, ebe ego a ga-eru 71 Nde TL na ụlọ ọrụ a ga-ewu gburugburu ya. A ga-arụ ọrụ ahịrị mita 100 puku 4 n'etiti ntụrụndụ Hikmetiye-Derbent Kuzu Plateau, nke bụ mpaghara izizi nke akara ụgbọ ala, nke nwere ikikere niile sitere n'aka ndị ọrụ gọọmentị oke ọhịa na mmiri. Uzo a ga-eji ihe owuwu wulite O-rụọ ọrụ ga-abụ ụzọ abụọ na eriri 960. Ọrụ a buru ibu, nke ga-agbanwe ọhụụ Kartepe, ga-eme ka ohere njem nke ma nke district na nke mpaghara anyị belata njem kwa afọ.
SITE DERBENT TO KUZUYAYLA
Linegbọ ala nke eriri ahụ na-amalite na Derbent Tourism Region (Hikmetiye) ga-akwụsị na Kuzu Yayla Nature Park. Ezie na eriri nke eriri ahụ bụ 4.67 km ogologo, 15 mast na ụlọ ụlọ 2 ga-arụ n'ime oke nke oru ahụ. Oghere eriri eriri ga-abụ mita 10, ụgbọ ala USB ga-enwe ụlọ ogologo 24 10. Usoro eriri ga-agba ọsọ na masts sitere na 11.06 mita ruo mita 45.95. Iklọ ọrụ Hikmetiye ga-eje ozi na mita 20.000 na Kuzuyayla Station na mita 3644. (Oğuzhan Aktaş - Akwụkwọ akụkọ Kocaeli Barış)
Usoro Samsin na-ebu ngwa ngwa amalitela
Usoro YHT nke YHT bụ mmiri ọzọ
PendikHalkalı Ejiri Ntinye Osimiri Na-emepe Mmiri Ọzọ!
Ọrụ Kartepe Ropeway dị na 2019